Armenia: Kooxo hubeysan oo qafaashay Taliyihii Booliiska iyo Shacab – VIDEO - Wargane News
Home Somali News Armenia: Kooxo hubeysan oo qafaashay Taliyihii Booliiska iyo Shacab – VIDEO
Armenia: Kooxo hubeysan oo qafaashay Taliyihii Booliiska iyo Shacab – VIDEO
Kooxo hubeysan ayaa shalay gelinkii danbe weerar ku qaaday Taliska Booliiska ee magaalada Yerevan ee caasimada dalka Armenia, halkaasi oo ay dad ku qafaasheen.
Maleeshiyaadka hubeysan ayaa xoog ku galay Taliska Booliiska, iska horimaad halkaasi ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan hal qof inta la xaqiijiyey.
Ragga weerarka soo qaaday ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan Taliyaha Booliiska iyo dad ku sugnaa xarunta Booliiska iyagoona hoosta kasoo xirtay daarta uu ku yaal Taliska booliiska. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay Korneyl booliiska ka tirsan, waxaana ku dhaawacmay sadex jeneraal oo booliiska dalkaasi ka tirsan.
Ciidamada Amaanka iyo kuwa militariga ee Armenia ayaa isku gadaamay goobtaasi, waxaana la xiray dhamaan wadooyinka goobtaasi mara iyadoo tan iyo xalay ay labada dhinac is horfadhiyeen.
Waxaa weli socda waan waan u dhaxeysa kooxda hubeysan ee afduubka ku heysata Taliyaha Booliiska iyo dowlada Armenia. Waxaa la xaqiijiyey in kooxdan ay dalbatay in xabsiga laga siidaayo dadka loo heysto arrimaha siyaasada oo uu ku jiro mid kamid ah hogaamiyayaasha mucaaridka dalkaasi.
Illaa iyo xalay dowlada Armenia ayaa xabsiga kasii daysay 50 qof oo kamid ah Mucaaridka dalkaasi, Xukuumada Armenia ayaa weli diidan inay siideyso ninkii aasaasay koox hubeysan ee mucaaridka oo lagu magacaabo Jirair Sefilian. Balse waan waanta ayaa weli socota.
SONYO Oo Dhallinyaro Qaranjoog Iyo Qurbe Joog Ah Isugu Keentay Dood Cilmiyeedka Horumarinta Dalka
Somaliland: Qaxootiga Kasoo Qaxaya Dalka Yamen Oo Kusoo Qul-qulaya Somaliland
U.N. Chief Ban Ki-Moon arrives in Baghdad for talks